दरबार हाईस्कुल कसको हो ?- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
दरबार हाईस्कुल कसको हो ?
जेष्ठ २१, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — दरबार हाईस्कुल भूकम्पले भत्काएपछि चिनियाँ सहयोगमा नयाँ निर्माण भएको छ । सांघाई कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको ४५ कोठाको चारतले भवन भव्य छ । अबको ६ महिनाभित्र निर्माणका सबै काम सम्पन्न हुनेछन् ।
नयाँ संरचना पाएको मुलुककै जेठो शिक्षालयभित्र दुई विद्यालय छन् । दुवैबीच विवाद छ । विवाद निरूपण नभई नयाँ संरचनाको उपयोगमा पनि असरपर्ने अवस्था छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले अझैसम्म विवाद निरूपण नगर्दा नयाँ संरचना उपयोग कसरी हुने भन्ने अझै प्रस्ट छैन । निर्माणको पहिलो चरण पूरा गरेपछि चिनियाँ कम्पनीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई बोलाएर अवलोकन गराइसकेको छ । ‘चिनियाँ सहयोगमा विद्यालय निर्माण आयोजना’ अन्तर्गत भवन बनिरहेको हो । ‘चारै तलाका सबै कोठा बनिसकेका छन्,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले भने, ‘निर्माण कम्पनीले सबै काम सकेर आगामी डिसेम्बरमा हस्तान्तरणगर्छु भनेको छ ।’
दरबार स्कुल स्थापना भएको १ सय ६६ वर्ष पुगेको छ । नयाँ भवन बनेसँगै अब कसरी सञ्चालन होला भन्ने चौतर्फी चासो छ । यो विद्यालय काठमाडौं महानगरपालिका–२७ अन्तर्गत रानीपोखरीको दक्षिणतर्फ साढे ९ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले विसं १९१० मा थापाथलीस्थित आफ्नै दरबारको आँगनमा पाठशाला सुरु गरेका थिए । त्यसैले उक्त पाठशालालाई ‘दरबार स्कुल’ भनेर चिनिएको हो ।
उक्त पाठशाला विभिन्न ठाउँ सार्दै रानीपोखरी परिसरमा पुर्‍याइएको हो । विसं १९३४ मा दरबार स्कुलमै संस्कृत पाठशालासमेत स्थापना भएको थियो । १९४८ सालमा रानीपोखरी छेउमा दुई तलाको एउटा ठूलो र लामो भवन बनेको थियो । उक्त भवनको भुइँतलामा संस्कृत मावि र माथिल्लो तलामा भानु मावि सुचारु थिए । भूकम्पले ध्वस्त भएपछि त्यहाँ पढदै गरेका दुवै विद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रदर्शनी मार्गस्थित वाल्मीकि विद्यापीठको हातामा अस्थायी टहरामा सारेर पढाइँदै आएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयप्रति समुदायको चासो घटेको छ । भानु माविमा शिशु कक्षादेखि १० सम्म पढाइन्छ । प्रधानाध्यापक हेमचन्द्र महतोका अनुसार शैक्षिक सत्र २०७६ मा १ सय ५० जति विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । अधिकांश विद्यार्थी काठमाडौं बाहिरबाट आएर व्यापार, व्यवसाय, मजदुरी गर्ने परिवारका छोराछोरी छन् ।
२१ जना शिक्षक र ४ जना कर्मचारी छन् । त्यसैगरी संस्कृततर्फ कक्षा ६ देखि ११ सम्म सुचारु छ । प्रधानाध्यापक बद्री दाहालका अनुसार चालु शैक्षिक सत्रमा १० कक्षासम्म १ सय ७० विद्यार्थी छन् । अधिकांश विद्यार्थी उपत्यका बाहिरका छन् । १५ शिक्षक र ६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
यी दुई विद्यालयबीच सम्पत्तिको विवाद पुरानै हो । जग्गाको स्वामित्व भानु माविको नाममा छ । विद्यालय भत्काएका पुराना सामग्री बिक्रीबापत प्राप्त नगदसमेत उसैसित छ । संस्कृत माविले जग्गा र नगदमा आफ्नो हिस्सा बराबरी हुनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयसित माग गरेको छ । मन्त्रालयले सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । ‘ऐतिहासिक विद्यालयको एकै छानोमुनि दुई विद्यालय छन्,’ उनले भने, ‘दुवैको अस्तित्व रहने गरी स्वामित्व बाँड्ने या गाभेर सुचारु गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं ।’
महानगरपालिकाको २७ नम्बरका वडाध्यक्ष चिनियामान बज्राचार्य यी दुई विद्यालय गाभ्ने या अलग–अलग सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए । ‘साधारण र संस्कृत दुवै धार अलग अलग सञ्चालन गर्ने भनेर अगाडिको भागमै दुईवटा छुट्टाछुट्टै ढोका बनाइएको छ,’ भित्रको संरचना एउटै रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अब कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे महानगरपालिका बोर्डले निर्णय गर्नेछ । त्यसका निम्ति शिक्षा मन्त्रालयको परामर्श महत्त्वपूर्ण हुनेछ । सम्भवतः वरिपरिका अन्य सरकारी विद्यालयसमेत त्यसैमा गाभिन सक्छ ।’ भवन संरचनाभित्र प्रधानाध्याक, प्रशासन, लेखा शाखा कक्ष अलग रहेकोउनले जनाए ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले दरबार हाईस्कुललाई विद्यालय तहकै रूपमा सञ्चालन गरिने बताए । यो स्कुलमा स्थानीय नेवार समुदायका बालबालिका पढ्ने वातावरण बन्छ ? ‘महानगरले विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढाउने र गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिको पहल गर्नेछ,’ प्रवक्ता डंगोलले भने । निर्माण चरणमै रहेकाले सञ्चालनबारे निचोडमा पुग्न बाँकी रहेकोउनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०८:१३
कोटेश्वर–कलंकी सडक : एकै क्षेत्रमा दुर्घटना बारम्बार
महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले सोमबारबाट मुख्य लेनमा ५० किमी प्रति घन्टा र सर्भिस लेनमा २० किमी प्रतिघन्टाको दरले गति निर्धारण गरेको छ
जेष्ठ २१, २०७६ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीको महानगरीय प्रहरी प्रभाग सानेपाका इन्स्पेक्टर हिक्मत थापा त्यहाँ खटिएको ६ महिना भइसक्यो । यो अवधिमा उनले धोबीघाटदेखि नयाँबाटो सडक खण्डमा दुर्घटना नभएको दिन विरलै छ । चक्रपथ विस्तारको काम सुरु भएयता यो आठ लेनको सडक खण्डका निम्ति दुर्घटना नियमितजस्तै भएको छ । यसैको एउटा शृंखला थियो, आइतबारको दुर्घटना र दुईको मृत्युको घटना ।
आइतबार झन्डै चार बजेको थियो । एकान्तकुनाबाट बल्खुतिर जाँदै गरेको बा १६ च ४७४३ नम्बरको स्कर्पियो स्वाट्टै मोडियो ।विपरीत दिशाबाट लस्करै आइरहेका थिए बोलेरो, महिन्द्राको जिप र बा४३प ९८६३ नम्बरको पल्सर मोटरसाइकल । उक्त स्कर्पियो सुरुमा बोलेरोसँग ठोक्कियो, त्यसपछि महिन्द्रा जिपसँग अनिअन्तिममा मोटरसाइकलसँग जुध्यो ।
मोटरसाइकलमा सवार नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पत्रकार गोविन्द घिमिरे र चन्द्रमणि मुडभरी घटनास्थलमै ढले । प्रहरीले तुरुन्तै उनीहरूलाई नजिकै रहेको मेगा अस्पताल लग्यो । अवस्था चिन्ताजनक भएपछि अस्पतालले रेफर गर्‍यो र, उनीहरूलाई थापाथलीको नर्भिक अस्पताल पुर्‍याइयो । प्रहरीका अनुसार अस्पतालले उनीहरूलाई मृत घोषणा गर्‍यो । घटनालगत्तै पक्राउ परेका स्कर्पियो चालकले गाडीको टायर पन्चर भएको र अनियन्त्रित भएपछि दुर्घटना भएको बताएका छन् ।
घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले सीसीटीभी फुटेज हेर्दा गुडिरहेको गाडी अचानक स्वाट्टै मोडिएर विपरीत दिशाबाट आएका सवारीसँग ठोक्किन पुगेको देखिएको बताए । दुर्घटना गराउने गाडी अगाडिको टायर पन्चर भएको प्रहरीले बताएको छ । तर इन्स्पेक्टर थापाले घटनाबारे सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेकाले तत्काल केही भन्न नमिल्ने बताए ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार चीन सरकारको अनुदानमा पहिलो चरणमा विस्तार भएको कोटेश्वर–कलंकी सडक खण्डमा सबभन्दा बढी दुर्घटना हुने स्थान नै धोबीघाट–नयाँबाटो सडक हो । थापाका अनुसार दुर्घटनाको मुख्य कारण तीव्र गतिभन्दा सडकको संरचना नै मुख्य हो । उनले अधिकांश दुर्घटनामासडक काट्ने बटुवाहरू परिरहेको बताए ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सोमबार दिउँसो अफिसियल ट्वीटर ह्यान्डलबाट एउटा सूचना प्रवाह गर्‍यो । उक्त सूचनामा कलंकी–कोटेश्वर सडक खण्डमा गति सीमा निर्धारण गरिएको उल्लेख छ । महाशाखाले मुख्य लेनमा ५० किमि प्रतिघण्टा र सर्भिस लेनमा २० किमि प्रतिघण्टाको दरले गति निर्धारण गरेको छ । सोमबारदेखि उक्त सडक खण्डमा सवारीसाधनको गति मापन गरिरहेको महाशाखाले तोकिएको भन्दा धेरै गतिमा सवारी चलाउनेलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद १० को दफा १६४अनुसार कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
महाशाखाका एसएसपी वसन्त पन्तले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा कोटेश्वर–कलंकी सडक खण्डमा बढेको दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सोमबारदेखि नै एक साता लामो अभियान सुरु गरिएको बताए । पहिलो साता ट्राफिकले गति निर्धारणसम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने र त्यसपछि सवारीको गति पत्ता लगाउने लेजर गन लिएर बसेका ट्राफिकले तोकिएको भन्दा धेरै गतिमा सवारी हाँक्नेहरूलाई कारबाही गर्ने बताए ।
ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकाका धेरै दुर्घटना हुने स्थानहरूलाई ब्ल्याक स्पट पनि तोकेको छ । एसएसपी पन्तका अनुसार धेरै दुर्घटना हुने ब्ल्याक स्पटमध्ये आइतबार दुर्घटना भएको स्थान पनि एक हो । उनले तीव्र गति, आवश्यक ट्राफिक चिह्न र ट्राफिक बत्तीको अभावमा दुर्घटना निरन्तर भइरहेको बताए । उनले भने, ‘उक्त क्षेत्रमा केही पूर्वाधार थप्नैपर्ने देखिन्छ । त्यो भनेको आकाशे पुल, फुटपाथ र मुख्य सडक छुट्याउने बार र ट्राफिक चिह्न हो ।’ तर तीव्र गति मात्रै यो क्षेत्रमा दुर्घटनाको मुख्य कारण होइन ।
उक्त क्षेत्रमा खटिएका एक ट्राफिक प्रहरीले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा त्रुटिपुर्ण सडक संरचना, ओभरहेड ब्रिजको कमी, सडकछेउमा अपर्याप्त बत्ती र सडक संकेतको अभाव मुख्य कारण रहेको बताए । त्यसो त इन्स्पेक्टर थापा पनि सडकको संरचनागत त्रुटि नै दुर्घटनाको मुख्य कारण भएको तर्कसँग सहमत छन् ।
उनका अनुसार धोबीघाट–नयाँबाटो सडक खण्डको तीन–चार सय मिटर खण्डमा उकालो, ओरालो र थोरै घुम्ती छ । उनले भने, ‘रातिको समयमा पैदलयात्रु दायाँ बायाँ हेर्दै बाटो काट्न बाध्य छन् । अनि त्यही बेला सवारी दुर्घटनामा पर्ने गरेको देखिन्छ ।’
२२ चैतमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको ट्रक पनि आइतबार सडक दुर्घटना भएको स्थाननजिकै दुर्घटनामा परेको थियो । स्कुटरलाई बचाउन खोज्दा अनियन्त्रित भएको गाडीले तरकारी बोकेर गुडिरहेको भ्यान किचेको थियो । त्यति बेला भ्यानमा सवार तीनमध्ये दुईजनाको मृत्यु भएको थियो ।
इन्स्पेक्टर थापाको बुझाइमा सडक संरचना तयार भए पनि पर्याप्त ट्राफिक संकेतको अभाव पनि दुर्घटनाको एउटा कारण देखिन्छ । डेढ महिनाअघि मात्रै उक्त क्षेत्रमा फ्रहरीको सक्रियतामा तीनवटा जेब्रा त्रसिङ राखिएको थियो । उनले भने, ‘सधैँ दुर्घटना भइरहने यो सडक खण्डबारे अब फरकतरिकाले नसोची नहुने भइसक्यो ।’
प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०८:१२
गाईजात्रा रूटमा सवारी निषेध
झोरमा बालमैत्री पार्क
दस दिनमा पानी
अनाधिकृत पार्किङ गर्ने ३९ हजार सवारीसाधन कारवाहीमा
स्मार्ट सिटीको डीपीआर तयार